‘फिर्के’ गीतमा ईकुलाई कति सुहायो गलबन्दी ? « Ramailo छ
‘फिर्के’ गीतमा ईकुलाई कति सुहायो गलबन्दी ?
’ईकु’ अर्थात् कलाकार सुलेमान शंकरले निर्माण गरेको फिल्म ’फिर्के’ को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । सुवास भुषालको संगीत, लेखु सहयात्रीका शब्द रहेको ’चट्टै’ बोलको गीतमा रामचन्द्र काफ्ले र अञ्जु पन्तको स्वर छ । गीतको भिडियोमा सुलेमान शंकर ’ईकु’ र नव-नायिका क्रिष्टिना पौडेलको नृत्य रहेको छ । गीतमा कबिराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको भिडियो यस्तो बनेको छ :
पौष १४ गते रिलिज हुने ’फिर्के’मा अर्पण थापा, सुलेमान शंकर, ऋचा शर्मा, क्रिष्टिना पौडेल, बिष्णु सापकोटा, अर्जुन गुरुङ्, उज्ज्वल भण्डारी, पुरन थापा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । यो फिल्मलाई २७ बर्ष कला क्षेत्रमा रहेर काम गरेका रवि डंगोलले निर्देशन गरेका छन् ।